Faahfaahin ka soo baxaysa qarax maanta ka dhacay Muqdisho - Home somali news leader
Home NEWS Faahfaahin ka soo baxaysa qarax maanta ka dhacay Muqdisho
Faahfaahin ka soo baxaysa qarax maanta ka dhacay Muqdisho
Hal ruux ayaa ku geeriyooday labo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax qabsaday gaari ay wateen shaqaalaha wacyigalinta cudurka COVID19 ee dawladda hoose ee magaalada Muqdisho.
Qaraxa ayaa ka dhacay meel aan sidaa uga fogeyn xarunta degmada Kaaraan, waxana gaariga ay wateen shaqaalaha wacyigalinta cudurka COVID19 ku xirnaa cod baahiyayaal dadka loogu sheegayo inay ka taxadaraan cudurka.
Illaa hadda ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda qaraxa lala beegsaday shaqaalaha wacyigalinta cudurka COVID-19.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere ayaa sheegay in qaraxii ka dhacay Kaaraan oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ah oo lala eegtay gaari ay la socdeen shaqaalaha Wacyi-gelinta Cudurka COVID-19 ee Gobolka.
Previous articleEU secures 4 million more Pfizer, BioNTech doses to target Covid-19 hotspots
Next articleAmnesty;”Maamulka Puntland waa in uu joojiyo xarigga iyo tacaddiyada ka dhanka ah weriyeyaasha”